नोभेम्बर 9, 2018 साइन्स इन्फोटेक	0 Comments डा. राम बहादुर बोहरा, भाई तिहार
भाई तिहार तिहारको अन्तिम दिन अर्थात् कार्तिक शुक्ल द्वितीय तिथिका दिन विशेष उत्साहका साथ मनाइन्छ । यो पर्व दिदीले भाइलाई र बहिनीले दाजुलाई अनि त्यसैगरी भाइले दिदीलाई र दाजुले बहिनीलाई विशेष मानसम्मानका साथ विधिपूर्वक पूजाआजा गर्ने, मेवा-मिष्ठान आदि मनपर्ने कुरा ख्वाउने, दिदी
तिहार सवैभन्दा चोखो भाई टिकालाई मानिन्छ । दाजुभाई र दिदी बहिनी वीचको दिदीले भाईलाई र बहिनीले दाजुलाई अनि त्यसैगरी भाईले दिदीलाई र दाजुले बहिनीलाई विशेष मान-सम्मानका साथ विधिपूर्वक पूजा-आजा गरेर मान्ने तिहारलाई भाई तिहार भनिन्छ ।
तिहारको अन्तिम दिन अर्थात् कार्तिक शुक्ल द्वितीय तिथिका दिन यो पर्व विशेष उत्साहका साथ मनाइन्छ । आज यो पर्व दिदीले भाइलाई र बहिनीले दाजुलाई विधिपूर्वक पूजा-आजा गर्ने, मेवा-मिष्ठान आदि मनपर्ने कुरा खुवाउने, दिदी बहिनीहरूलाई दान-दक्षिणा एवं वस्त्र आदि दिने परम्परा छ ।
परापूर्वकालमा बहिनी यमुनाले यसै दिन आफ्नो भावना अन्तर्निहित पाइन्छ । दाजु यमराजलाई विशेष मानसम्मान गर्दै भाईपूजा गरेको धार्मिक महत्त्व छ । यमपञ्चकका पाँच दिन यमराजले यमुनाको घरमा बास गर्छन् भन्ने हाम्रो धार्मिक विश्वास छ ।
यी पाँच दिन इन्द्रादि दश दिक्पालले बलि राजाका लागि आफ्नो राज्य छाड्ने कथा पनि पाइन्छ । भाई तिहारको दिन दियो, कलश र गणेशको पूजा गर्ने, यमराजको आह्वान गर्ने, बिमिरो, ओखर, तेल, मखमलीको माला, दूबोको टीका, कटुस आदिको प्रयोगमा आफ्ना दिदी बहिनी र दाजुभाईको सुख-समृद्धि, अरोग्य एवं दीर्घायुको कामना अन्तर्निहित छ ।
← धर्मको आस्था जगाउ र बलियो बनाउँ
भान्साको औषधि ज्वानो र यसको उपयोग →
यी ७ कारणहरु नभएको भए हुँदैनथ्यो महाभारतको युद्ध
को थिए बलि राजा ?
उपवास एवं ब्रत बस्नु अघि ध्यान दिनैपर्ने कुराहरु
मार्च 31, 2019 साइन्स इन्फोटेक 0